मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : असोज ८ र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशकमा डा. दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस बालुवाटरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक, यी विषयमा हुँदैछ छलफल
त्यस्तै बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार, राहत तथा आर्थिक सहयोगको बारेमा नियमितझैँ छलफल र निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल-इजरायल सरकारबीच दुई देशको हितमा हुने विभिन्न सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अन्जन शाक्यिलाई दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण १८ निर्णय (सूचीसहित)
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय :